अदालतको मानहानी गरेको भन्दै गोबिन्द केसीलाई पक्राउ गर्न अदालतको आदेश !
ARCHIVE » अदालतको मानहानी गरेको भन्दै गोबिन्द केसीलाई पक्राउ गर्न अदालतको आदेश !
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डा गोविन्द केसीलाई अदालतको मानहानी गरेको भन्दै मंगलवार अदालतमा हाजिर गराउन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजालसले केसीलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको हो ।
उनले अनसन शुरु गर्नुपूर्व जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’विगत केही महिनादेखि सिलसिलेवर रुपमा भ्रष्ट र अपराधीहरुको पक्षमा फैसला भएर न्याय बिक्री भइरहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सबैका सामु छर्लंग छ ।